Ukuphupha iMassage Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ngokuqinisekileyo abantu abaninzi bazibonele ngawabo ukuba kunokuba luncedo njani ukonwaba emva kosuku oludinisayo. Lala apho, vala amehlo kwaye wonwabele ukuphathwa kakuhle kulusu lwakho: ukuphumla okucocekileyo. Ukuthanjiswa okuqhelekileyo kunembali yezonyango. Isetyenziselwa ukuphumla amaqela ezihlunu eziqinileyo, ukunciphisa iintlungu kwinkqubo yemisipha, kwaye yenziwa ngoochwephesha abaqeqeshiweyo bokuthambisa.
Namhlanje, nangona kunjalo, ukuthanjiswa komzimba kunxibelelene ngokungenakulinganiswa kunye negama "impilo-ntle". Nokuba kukuthanjiswa kwaseThailand, ukuthanjiswa ngamatye ashushu okanye i-tantra massage, ukhetho lweentlobo zokuthanjiswa lubanzi kangangokuba wonke umntu unokuthatha isigqibo ngokokuthanda kwabo ukuba bafuna ukuncitshiswa njani. Kungenzeka kwakhona ukuba siphupha ngokuthintela ukuphumla. Nangona kunjalo, oku kufuneka kutolikwe ngokwahlukileyo kutoliko lwamaphupha.
1 Uphawu lwephupha «i-massage» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «i-massage» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «i-massage» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «i-massage» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukufumana umyalezo ephupheni kuhlala kunenye kutoliko jikelele lwephupha. iisimboli zesondo. Nabani na otofelweyo kunye nokuthanjiswa emaphupheni uyakuthanda ukuziva ekhululekile eluthandweni kwaye ukhetha ukuhamba ngendlela elula. Oku kunokuthetha ukuba ufuna ukuvumelana, kodwa le meko yamaphupha ikwacebisa ukuba uhlala ungenzi nto. Ukuphupha kunokwenzeka kuxhomekeke kakhulu kubudlelwane bakho. kukuzingca Ukuziphatha. Uhlala ebeka ulwaneliseko kunye nezinto azifunayo ngaphambi kweemfuno zeqabane lakhe.
Enye indlela yokutolika ibona kwi-massage oyifumanayo ephupheni, uphawu lokuphumla okuyimfuneko. Nokuba awuziva ugula okanye ubuthathaka, kuya kufuneka uthathe amanyathelo othintelo. Yithathe lula kwaye ucwangcise ixesha elincinci ngoku uzenzele ngokwakho!
Ngaba umoshe omnye umntu nge-massage ephupheni? Oku kunokuthetha ukuba kufuneka ulungise into kungekudala. Unokukhetha impazamo kwaye uyilungise ngaphambi kokuba ibangele umonakalo omkhulu.
Ngokubanzi, ukuthanjiswa kwesandla ngexesha lokuzicoca umzimba kunokuhlala kulumkisa ngokuchasene nokunyeliswa kunye nokunyeliswa. Ukuthanjiswa kwe-Scalp phambi kwe-salon kubonisa ukuba kulula ukucinga ngokucacileyo kwaye wenze izigqibo.
Uphawu lwephupha «i-massage» - ukutolikwa kwengqondo
Umfanekiso wephupha "i-massage" inendawo yokujonga kwengqondo eyomeleleyo. uphawu melancholic. Umntu ophuphayo uswele ukuphathwa ngothantamiso, ukwangana, kunye nokunxibelelana nomzimba onothando. Rhoqo, iphupha lokuthanjiswa likwanxulunyaniswa neemvakalelo ezingaqhelekanga. Ngokuqinisekileyo ikwadlala indima yokuba ngubani obandakanyekayo kwi-massage nokuba bayifumene into yomnye umntu echukumisayo.
Ukuba utyikitye iqabane lakho okanye umthandi ephupheni, eli nyathelo lidla ngokubonisa umnqweno wobudlelwane obusondeleyo kunye nobunzulu. Ufuna ukusondela ngokupheleleyo komnye nomnye, ukuze ungene phantsi kolusu lwabo, ukuze uthethe.
Ukutolika ngokuchaseneyo ngamaphupha okuthambisa okushiya ungaziva ungonwabanga. Mhlawumbi omnye umntu sithi kuseondele kakhulu weza. Oku kunokubonakala ngathi kunqamleze umda kwaye umntu ekuthethwa ngaye kufuneka akuchaze ngokucacileyo oku.
Uphawu lwephupha «i-massage» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya yokujonga ukutolika kwamaphupha, ukuthambeka luphawu lwe Ukunikezela y Ubumnandi.